The National Center maka Electronic Commerce na Digital Marketing a mụrụ na Spain | ECommerce ozi ọma
A mụrụ National Center for Commerce Electronic na Digital Marketing na Spain
Eva Maria Rodriguez | | Eziokwu na akụkọ, Ọzụzụ ECommerce
Site n'aka Ministri nke Mmeputa, Ike na Ndi njem nke Spain amụrụ ya Centerlọ Ọrụ Mba Na-ahụ maka Ahịa Electronic na Digital Marketing, ebe ntinye aka nke mba "Ọ na-ezube ịzaghachi mgbanwe ndị a mere n'afọ ndị na-adịbeghị anya n'ọhịa nke azụmaahịa na ịzụ ahịa na ntanetị nke akụ na ụba na ọha mmadụ."
Emebela atumatu a site na nkwekorita mmekorita nke etiti n'etiti ebumnuche nke Digital Agenda maka Spain ma, ya mere, a na-echebara echiche n'ime atụmatụ nke "Digital Nsonye na Employability" na "ICT na SMEs na Ahịa Ahịa Electronic".
Ministri nke Ulo oru, Ike na njem nlegharị anya ekwuputala na ihe omuma nke gosiputara okike nke etiti a.
A na-ewepụta ihe siri ike maka ndị ọkachamara nwere ọfụma dijitalụ ọhụụ metụtara azụmaahịa, yabụ achọrọ usoro iji dozie ọzụzụ, ọzụzụ na iru eru maka eziokwu nke ụlọ ọrụ chọrọ. Okwesiri igosiputa ntụgharị nke ikike ndị a, nke na-emetụta asọmpi nke ọrụ akụ na ụba na ọrụ aka na ụwa zuru ụwa ọnụ yana nke na-arụ ọrụ na ụba ọtụtụ.
1 Ebumnuche nke National Center for Commerce Electronic and Digital Marketing
2 Mmekọrịta ọha na eze
3 Ọzụzụ gbanwere maka ọrụ nke ọrụ ọrụ
Ebumnuche nke National Center for Commerce Electronic and Digital Marketing
Ebumnuche bụ isi nke National Center for Commerce Electronic na Digital Marketing gụnyere ihe ndị a:
mee ka ọrụ dị na ngalaba akụ na ụba dijitalụ kwalite site na ịchọpụta profaịlụ kachasị achọ na e-azụmahịa, ahịa na mmekọrịta ọha na eze;
ọzụzụ ma ọ bụ nchoputa nke ndị ọkachamara iji duzie ha maka ọrụ ọhụụ
ime ka ọkachamara na agụmakwụkwọ mara ọrụ ọhụrụ
nkwalite nke azụmaahịa achụmnta ego
N'ụzọ dị otú a, usoro mmụta ga-abụ ihe kacha mkpa maka nzukọ ọhụrụ a, ebe ọ bụ na a ga-akwalite mmelite nke mmemme Ọzụzụ Ndị Ọrụ iji dozie ha na ọrụ ndị ọkachamara ọhụrụ chọrọ na mpaghara ndị ọhụrụ nke akụnụba. Maka nke a, a ga-enyocha ma mesoo modul ọzụzụ, asambodo ọkachamara na ogo mmụta ọkachamara, a ga-akwalite ogo ọhụụ.
Mmekọrịta ọha na eze
Schoollọ Akwụkwọ nke Industriallọ Ọrụ nke Ọrụ (EOI), nke dabere na Ministry of Industry, Energy and Tourism, ga-anabata Centerlọ Ọrụ Ntuziaka ọhụrụ na akụrụngwa ya ma ga-ahụ maka ijikwa ọrụ ya, na mmekorita ya na ụlọ ọrụ azụmahịa ọha na eze Red.es, nke daberekwa na Ngalaba Na-ahụ Maka Ahịa. Ministri nke Mmụta, Omenala na Egwuregwu na Mịnịstrị na-ahụ maka Ọrụ na Social Security jikọtara ọnụ na mwepụta nke Centerlọ Ọrụ ahụ site na Ọrụ Ọha na Ọha na Ọha (SEPE), nke ga-akwụ ụgwọ ọrụ ndị a gụnyere na atụmatụ ọrụ kwa afọ nke Center.
Na mgbakwunye na akụrụngwa ya, Schoollọ Akwụkwọ nke Industriallọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ ga-eme ka ikpo okwu ya na ihe ọzụzụ ọzụzụ n'ịntanetị dị na Center, yana ọtụtụ ndị nkụzi ya.
Centerlọ Ọrụ ahụ nwekwara nkwado nke ngalaba azụmahịa, nke itinye aka na mmekorita ya bụ isi ihe na-achọpụta nkà na profaịlụ kachasị mkpa, na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịbanye na ụlọ akwụkwọ ma na-akwado mmepe nke usoro achụmnta ego.
Centerlọ Ọrụ ahụ ga-enwe Council ma ọ bụ ahụ maka mmekọrịta maka ngalaba na-arụpụta ihe, nke, na mgbakwunye na itinye nnọchite nke gọọmentị ndị bịanyere aka na nkwekọrịta ahụ, ga-enwe nsonye nke ndị na-azụ ahịa na ndị otu nọchitere anya.
Ọzụzụ gbanwere maka ọrụ nke ọrụ ọrụ
Centerlọ Ọrụ ahụ ga-enwe ngalaba atọ dị mkpa.
Ngalaba nyocha na nyocha: Ọ ga-ahụ maka nyocha, na ọkwa steeti, mgbanwe nke ngalaba na-arụpụta ihe iji mezie ọzụzụ ọzụzụ maka mkpa nke ahịa ọrụ. N'otu aka ahụ, ọ ga-amụ ihe dabara adaba nke akụrụngwa, akụrụngwa na ngwa nkuzi maka ebe a na-azụ ọzụzụ, ma soro ha na ụlọ ọrụ dị na ngalaba ahụ nwee mmekọrịta nke iji kwalite nyocha, ihe ọhụrụ na mmepe nke ọzụzụ ọkachamara.
Ngalaba maka mmepe, ihe ọhụrụ, nnwale na ọzụzụ: Ọ ga-elekọta nnwale ahụ na mmemme mmegharị ọzụzụ metụtara njikọ na National Catalog of Professional Qualifications iji gosipụta oke ya yana, ebe o kwesịrị ekwesị, mepee ọdịnaya emelitere, usoro na nkuzi. Tụkwasị na nke a, ọ ga-enye aka n'ịmepụta na ịmepụta atụmatụ mmelite teknụzụ na usoro iji zie ndị ọrụ nkuzi ma ọ bụ ọzụzụ ọzụzụ, ga-eso ndị ọrụ azụmaahịa na ndị otu nọchitere anya ga-esonye na mmemme na mmemme mba ụwa.
Ngalaba nzere ntozu na nnabata nke iru oru ndị ọkachamara: ga-ahụ maka imekorita na INCUAL na imelite National Catalog of Professional Qualifications, imekorita na nkwadebe nke asambodo nke ndị ọkachamara, yana imekọ ihe ọnụ na nyocha na usoro nzere nke ikike ndị ọkachamara nwetara site na ahụmịhe ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » A mụrụ National Center for Commerce Electronic na Digital Marketing na Spain
ESIC na - ebuputa Challenge Finance, n’egwuregwu onwa n’egwuregwu onlinegba Cha Cha
Ajụjụ ọnụ nke Julio Izquierdo, onye isi oche nke Peerade Social na onye okike nke ngwa Share Tren Mesa AVE